Jamie Redknapp Oo Tilmaamay Hal Koox Oo Uu Xiddig Fiican Ku Noqon Lahaa Paul Pogba, Premier League Ayay Ka Ciyaartaa – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Jamie Redknapp Oo Tilmaamay Hal Koox Oo Uu Xiddig Fiican Ku Noqon Lahaa Paul Pogba, Premier League Ayay Ka Ciyaartaa
Jamie Redknapp Oo Tilmaamay Hal Koox Oo Uu Xiddig Fiican Ku Noqon Lahaa Paul Pogba, Premier League Ayay Ka Ciyaartaa
Khabiirka ahna halyeeyga Liverpool ee Jamie Redknapp ayaa tilmaamay kooxda Premier league ka ciyaarta ee uu Paul Pogba ku noqon lahaa ciyaartoy fiican.
Xiddiga reer France ayaa kulamadii ugu dambeeyay ku dhibaatooday isaga oo aan wali dhamaysan kulan 90 daqiiqo ah saddxdii kulan ee ugu dambaysay.
Si kasta ha ahaatee Jamie Redknapp ayaa aaminsan in Paul Pogba uu noqon lahaa ciyaaryahan wanaagsan haddii uu u ciyaarayo kooxda ay Man United xafiiltamaan ee Manchester City.
Pogba ayaa qaab ciyaareed liita soo bandhigay soo bandhigay kulankii ay United guuldarada 2/0 ah kala kulantay Tottenham isaga oo xitaa u muuqday mid la muramaya tababaraha kooxda ee Jose Mourinho taas oo keentay in laga saaro shaxda Rasmiga ah kulankii xigay Huddersfield isaga oo kaydka ka soo kacay.
Paul Pogba ayaa shaxda kooxda Man United ku soo laabtay kulankii Newcastle waxana mar kale badal lagu sameeyay kulankaas oo ay United guuldarada kala kulantay Newcastle.
Redknapp ayaa aaminsan in ayna ahayn in Pogba la saaro kulankii Tottenham oo uuna Pep Guardiola badal ku samayn lahayn Pogba.
Isagoo ka hadlayay Sky Sport ayuu yiri: “anigu ma lihi in aanad u baahanyn in aad xiddiga dajiso, Guardiola oo samaynaya xaaladaas oo kale. hadii uu u ciyaarayo City waxa uu noqon lahaa mid ka mid ah xiddigaha ugu qaab ciyaareedka fiican”.
“Uma malaynayo in uu Jose Mourinho ka soo saarayo qaab ciyaareedka ugu fiican xiddiga”.
“Pep Guardiola ayaa ah nooca tababaraha xiddiga ka soo saari kara qaab ciyaareed fiican, Laakiin Mourinho ayaa u muuqda mid ka qaadaya qaab ciyaareedka fiican”.
“Jose Mourinho waxa uu doonayaa in uu dagaal la galo xiddigaha haatan, marka loo eego awooda uu Pogba ku leeyahay qolka Labiska, Mourinho waa in uu is ilaaliyo, ma aaminsan in ay fiicantahay in uu ka xanaajiyo mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican kooxda”.